ဆဲလျဂြူံးဘုရငျကွီး သို့မဟုတျ ကိုးရီးယား အက်ခရာစာလုံးမြားကို မှေးဖှားပေးခဲ့သူ
ကိုးရီးယားတှရေဲ့ သမိုငျးမှာ အရေးပါဆုံးသော ပုဂ်ဂိုလျကွီးမြား ရှိခဲ့ရာမှာ ဘုရငျကွီး ဆဲလျဂြူံးလညျး တဈဦးအပါအဝငျ ဖွဈပါတယျ။ ဆယျဂြူံး ဘုရငျကွီးဟာ ဂြိူဆှနျးခတျေရဲ့ ၄ ဆကျမွောကျ ဘုရငျဖွဈပွီး သူဟာ ဂြိူးဆှနျးခတျေ ပွုပွငျပွောငျးလဲရေးမြား သာမက ခတျေသဈ ကိုးရီးယားနိုငျငံအတှကျပါ အရေးပါတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတဈဦးပါ။ သူ့လကျထကျမှာ ယနခေ့တျေသုံး ကိုးရီးယားစာပကေို တီထှငျခဲ့ပွီး ကိုးရီးယားတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျစာပအေဖွဈ ရပျတညျနိုငျအောငျ ကွိုးပမျးခဲ့သူပါ။
ဂိုဂြိူဆှနျးခတျေမှသညျ ဂြိူဆှနျး နိုငျငံ ပျေါထှကျလာသညျအထိ ခတျေအဆကျဆကျ ကိုးရီးယားလူမြိူးတို့ဟာ တရုတျစာပကေိုသာ သုံးစှဲခဲ့ကွပွီး ကိုယျပိုငျစာပေ မရှိသေးပါဘူး။ တရုတျစာပဟော ကိုးရီးယားတို့ လူမှုအဖှဲ့အစညျးထဲမှာ လူအနညျးစုသာ တတျမွောကျတဲ့ ဘာသာဖွဈပွီး လူတိုငျး စာပတေတျမွောကျခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကွောငျ့ ဘုရငျကွီး ဆဲလျဂြူံးလကျထကျမှာ လူတိုငျး စာပတေတျမွောကျအောငျ ကိုယျပိုငျစာပကေို တီထှငျခဲ့ပါတယျ။ ဆဲလျဂြူံး ဘုရငျလကျထကျမှာ ကိုရီးယားစာပတေငျ မကဘဲ မိုးရခြေိနျတိုငျး ကိရိယာ၊ နက်ခတာရာကွညျ့ ကိရိယာ၊ နနောရီ၊ ရနောရီ၊ ရတေကျရကေတြိုငျး ကိရိယာ၊ လတေိုကျညှနျတံ စတဲ့ စမျးသဈတဲ့ ပညာတှကေိုလညျး မွောကျမြားစှာ တီထှငျခဲ့ပါသေးတယျ။
(ဂိုဂြိူးဆှနျးဆိုသညျမှာ ရှေးခတျေ ဂြိူဆောငျခတျေ အစောဆုံး ကိုးရီးယားနိုငျငံ ခငျြခတျေမှာ စတငျ တညျထောငျခဲ့ပွီး ထို့ထကျလညျး စောနိုငျတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဟနျခတျေမှာ ဂိုဂြိူဆှနျး ချေါ ရှေးဂြိူဆောငျ နိုငျငံကို ဟနျအငျပါယာမှ ဝငျရောကျတိုကျခိုကျခဲ့ရာ နိုငျငံပကျြသုနျးသှားခဲ့ပွီး ဘူရော အုတျဂြိူဒယျဘနျး စသညျဖွငျ့ နယျမွမြေား ကှဲထှကျသှားခဲ့ပွီး ဂြူ မုံ ဘုရငျမှ မွောကျဘကျ နယျမွမြေားကို စုစညျးကာ ဂိုဂူလြော နိုငျငံအဖွဈ ပွနျလညျတညျထောငျခဲ့ပါ။)
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျကွီးကို ခရဈနှဈ 1397 ခုနှဈ May လ 15 ရကျနမှေ့ာ ဂယောငျဂီပွညျနယျ ဟနျဆောငျး (ယခု ဆိုးလျမွို့) မွို့၌ ခမညျးတျော ထဲယျဂြူံး ဘုရငျ နှငျ့ မိဖုရားခေါငျကွီး ဝမျယောငျး တို့မှ မှေးခဲ့ပါတယျ။ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ မှေးခငျြးညီအကိုမြားထဲမှာ ၃ ယောကျမွောကျ ဖွဈပါတယျ။ ငယျနာမညျမှာ 이도 李祹 လီဒို ယီဒုံ ဖွဈပါတယျ။
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျ အသကျ ၁၂ နှဈ အရှယျမှာတော့ မငျးသား ခြှနျးယောငျး 충녕대군 ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ ငယျရှယျသေးတဲ့ ဆဲလျဂြူံး မငျးသားလေးဟာ စာပလေလေ့ာရာမှာ ထူးခြှနျတဲ့အတှကျ ထယျဂြူံးဘုရငျ မငျးသားလေးကို သူ့အကို ၂ ယောကျထကျ နှဈသကျသဘောကခြဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လညျး ဆဲလျဂြူံးဟာ နနျးတကျဖို့ ပွိုငျဘကျကငျးခဲ့ပမေယျ့ နနျးတှငျးထုံးတမျး အစဉျအလာအရ သူ့အကိုကတော့ အိမျရှစေံ့မငျးသား ဖွဈနသေေးပါတယျ။ ၁၄၀၄ သူ့အကိုဟာ အိမျရှစေံ့အဖွဈ တငျမွှောကျခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။ သို့သျော သူ့အကိုဟာ လှပျလတျစှာ နထေိုငျရတာကို နှဈသကျပွီး အမဲလိုကျခွငျးနှငျ့ ပြျောပှဲရှငျပှဲမြား ကငျြးပခွငျးတို့ကွောငျ့ ၁၄၁၈ ဂြှနျလပိုငျးမှာတော့ အိမျရှစေံ့ရာထူးမှ ဖယျရှားခွငျး ခံခဲ့ရပါတယျ။
တခြိူ့ကတော့ အဈကိုတျော ရနျးယောငျးမငျးသားဟာ သူ့ညီ ဆဲလျဂြူံး မငျးသားကို ညီအကိုတှထေဲမှာ အခဈြဆုံးမို့ သူကိုယျတိုငျ အိမျရှစေံ့အဖွဈကနေ စှနျ့လှတျခဲ့တယျလို့ ပွောကွပမေယျ့ မှတျတမျးတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ အကိုကွီးကလညျး လူ့ဘောငျကို စှနျ့ခှာပွီး ဘုနျးကွီးဝတျသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ဆဲလျဂြူံးဟာ အသကျ ၂၁ နှဈ ၁၄၁၈ မှာ အိမျရှစေံ့မငျးသား အဖွဈသို့ ရောကျရှိခဲ့ပါတယျ။ အစပိုငျးမှာတော့ သူ့အကိုကွီးကို အိမျရှစေံ့အဖွဈက ထုတျပယျပွီး သူ့ကို အိမျရှစေံ့မငျးသားအဖွဈ ပေးတာကို မှူးမတျမြား နနျးတှငျးအမတျ တခြိူ့က မကနြေပျကွပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ၁၄၁၈ ဆဲလျဂြူံးကို အိမျရှစေံ့အဖွဈ ပေးအပျခဲ့ပွီး ထယျဂြူံးဘုရငျဟာ ဘုရငျရာထူးမှ အနားယူခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ထယျဂြူံး ဘုရငျရဲ့ အရှိနျအဝါကတော့ ရှိနဆေဲပါ။ ဆဲလျဂြူံး ဘုရငျဟာ ထလျဂြူံး ဘုရငျကွီး နတျရှာစံတဲ့ ၁၄၂၂ ခုနှဈအထိ အစိုးရအတှငျး မူဝါဒမြားကို ပွောငျးလဲခွငျး မပွုလုပျခဲ့သေးပါဘူး။
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ နိုငျငံရေးပွောငျးလဲမှု အနနေဲ့ ကှဲပွားခွားနားထားတဲ့ လူနမှေုပုံစံကနေ တိုငျးပွညျအတှကျ လိုအပျတဲ့ နရောတှမှော လူတနျးစား အဆငျ့အတနျးမခှဲခွားပဲ ထူးခြှနျသူတှကေို ခနျ့အပျတဲ့ပုံစံ ကငျြ့သုံးခဲ့ပါတယျ။
သူဟာ ကှနျဖွူးရှပျဝါဒကို ကငျြ့သုံးခဲ့ပွီး သူ့ပွညျသူတှကေိုလညျး ကှနျဖွူးရှပျဝါဒကို ကငျြ့သုံးဖို့ အားပေးခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူ့လကျထကျမှာ ကှနျဖွူးရှပျဝါဒဟာ ဂြိူဆှနျး လူမှုအဖှဲ့အစညျးထဲမှာ တှငျကယျြလာခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ကှနျဖွူးရှပျဝါဒနဲ့ ပတျသတျတဲ့ စာအုပျတှကေိုလညျး ထုတျဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ နောကျပိုငျးမှာတော့ သူဟာ မဟာယန ဗုဒ်ဓဘာသာဝငျအဖွဈ ကူးပွောငျးခဲ့ပါတယျ။
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျလကျထကျမှာတော့ တရုတျနိုငျငံ မငျမငျးဆကျနဲ့ သဘောတူညီခကျြ တခြိူ့ကို အောငျမွငျစှာ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပွီး ဂြိူဆှနျးပွညျရဲ့ စီပှားရေးကို အကြိူးအမွတျရရှိအောငျ လုပျဆောငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဂြာခနျြလူမြိူးတှနေဲ့လညျး ဆကျဆံရေးကောငျးကို တညျဆောကျခဲ့ပွီး မွောကျဘကျ ကိုးရီးယားနယျစပျမှာ တပျမွေ ၄ ခု မွို့ ၆ မွို့မှာ နယျခွားစောငျ့တပျစခနျး ၁၀ ခုကို ထပျမံတိုးခြဲ့ခဲ့ပါတယျ။ ဂပြနျနိုငျငံနဲ့လညျး ကောငျးမှနျတဲ့ ဆကျဆံရေး ရှိခဲ့ပွီး ဆိပျကမျးမွို့ ၃ ခုမှာ ကုနျသှယျခှငျ့ပွုခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဆူရှီးမားကြှနျးကို စဈတပျဖွငျ့ ကြူးကြျောခဲ့ပွီး တောငျပငျလယျမှာ သောငျးကနျြးနတေဲ့ ဓားပွတှကေို နှိမျနငျးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့အခြိနျက ဆူရှီးမားကြှနျးဟာ ဂပြနျပငျလယျဓားပွတှရေဲ့ အခွစေိုကျစခနျး ဖွဈပါတယျ။
ဂြိူဆှနျးစဈတပျအငျအားကို တိုးခြဲ့ခွငျး
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ ဂြိူဆှနျးခတျေ စဈတပျကို အငျအားကွီးတဲ့ စဈတပျဖွဈအောငျ တညျထောငျခဲ့တဲ့ ဘုရငျတပါးလညျး ဖွဈပါတယျ။ သူ့လကျထကျမှာ ဂြိူဆှနျးစဈတပျကို အငျအားကွီး စဈတပျဖွဈလာအောငျ မြားစှာသော စဈစညျးကမျးမြား စဈမှုထမျးဥပဒမြေားကို ခမြှတျခဲ့ပါတယျ။ ထို့အပွငျ စဈလကျနကျမြားကို တီထှငျခဲ့ပါတယျ။ အမွောကျမြား ဒုံကညျြ (မွတံပူ) မီးမွှားပဈအမွောကျမြား မျောတာအမွောကျမြားကို ယမျးမှုနျ့မြား အသုံးပွုကာ တီထှငျထုတျလုပျခဲ့ပွီး နိုငျငံတဝှမျးရှိ စဈတပျတိုငျးမှာ တပျဆငျ အသုံးပွုစပေါတယျ။ ထို့ကွောငျ့လညျး အငျဂငျြးနှဈ စဈပှဲမြားအတှငျးမှာ အမွောကျမြားကို ကြှမျးကငျြစှာ အသုံးပွုပွီး ရကွေောငျးစဈပှဲ မွပွေငျစဈပှဲမြားမှာ အမွောကျမြားဖွငျ့ ဂပြနျတို့ကို အနိုငျယူခဲ့ပါတယျ။
၁၄၁၉ မလေမှာတော့ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ အနားယူသှားသော ဘုရငျ ထယျဂြူံး၏ အကွံပေးခကျြအရ ဆူရှီးမားကြှနျးကို အခွစေိုကျကာ တောငျပငျလယျ၏ ကုနျသှယျရေးကို နှောငျ့ယှကျနသေော ဂပြနျ ပငျလယျဓားပွတို့အား နှိမျနငျးရနျ ဂြိူဆှနျး စဈတပျကို စလှေတျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ စဈပှဲအတှငျး ဂပြနျပငျလယျဓားပွ ၂၄၅ ယောကျကို သတျနိုငျခဲ့ပွီး ၁၁၀ ယောကျကို အရှငျဖမျးဆီးနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဂြိူဆှနျးဘကျမှ စဈသညျ ၁၈၀ ကြျော ကဆြုံးခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ ၁၄၁၉ စကျတငျဘာလမှာတော့ ဂြိူဆှနျး စဈတပျဟာ ပွညျတျောပွနျဝငျခဲ့ပါတယျ။ ဆူရှီးမား ကြှနျးစု ဒိုမွို နဲ့ တကယျတမျး သဘောတူညီခကျြ ရရှိခဲ့တာကတော့ ၁၄၄၃ ခုနှဈမှသာ ရရှိခဲ့တာပါ။ ဆူရှီမား ဒိုငျမွိုဟာ ၁၄၄၃ မှာ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျထံ လကျဆောငျပဏ်ဍာမြား ဆကျသကာ ဆူရှီးမားကြှနျးနဲ့ ဂြိူဆှနျးတို့အကွား ကုနျသှယျခှငျ့ သဘောတူညီခကျြ စာခြူ ပျကို ခြူ ပျဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ စာခြူ ပျအရ ဂပြနျပွညျဟာ ဂြိူဆှနျးရဲ့ ဆိပျကမျး ၃ ခုမှာ ကုနျသှယျခှငျ့ရပါမယျ။
၁၄၃၃ ခုနဈမှာတော့ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ စဈသူကွီး ကငျဂြူံဆိုးကို ဗိုလျခြူ ပျကွီးအဖွဈ ရာထူးတိုးပေးပွီး မွောကျပိုငျးရှိ ဂြာခနျြလူမြိူးစု (ယနခေ့တျေ မနျခြူးလူမြိူးစု) တို့ကို နှိမျနငျးစပေါတယျ။ ကငျဂြူံဆိုးနဲ့ သူ့စဈတပျဟာ မွောကျပိုငျးဒသေရှိ ဂြာခနျြတို့ကို နှိမျနငျးခဲ့ပွီး မွောကျဘကျကို နယျမွခြေဲ့ထှငျရာမှာ ယနခေ့တျေ မွောကျကိုရီးယား တရုတျနယျစပျအထိ နယျမွခြေဲ့ထှငျခဲ့ပါတယျ။ အဲ့နောကျ မွောကျဘကျ နယျစပျကို ကာကှယျဖို့ ခံတပျမွို့ ၄ ခုနဲ့ နယျစပျ စဈစခနျး ၆ ခုဖွငျ့ တပျစှဲထားခဲ့ပွီး ဂြာခနျြတို့၏ ရနျမှကာကှယျရနျ စီမံထားခဲ့ပါတယျ။
တိုငျးပွညျအတှငျး ပွု ပွငျပွောငျးလဲမှုမြား
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ လယျသမားတှကေို ကူညီပေးခငျြတာကွောငျ့ လယျယာသုံး လကျစှဲစာအုပျကို ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ စာအုပျမှာ လအလိုကျ စိုကျပြိူးသငျ့တဲ့ သီးနှံတှေ လယျသမားတှအေတှကျ အကြိူးရှိမယျ့ သတငျးမှတျတမျးတှေ သီးနှံစိုကျပြိူးနညျးတှေ စသညျဖွငျ့ ထညျ့သှငျးရေးသားထားပါတယျ။ ထို့အပွငျ မိုးရခြေိနျတိုငျး ကိရိယာ၊ နက်ခတာရာကွညျ့ ကိရိယာ၊ နနောရီ၊ ရနောရီ၊ ရတေကျရကေတြိုငျး ကိရိယာ၊ လတေိုကျညှနျတံ စတဲ့ စမျးသဈတဲ့ ပညာတှကေိုလညျး မွောကျမြားစှာ တီထှငျခဲ့ပါသေးတယျ။
မိုးရခြေိနျတိုငျး ကိရိယာဟာ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး တီထှငျနိုငျခဲ့တာဖွဈပွီး ကိုးရီးယားလူမြိူးတှရေဲ့ ဂုဏျယူစရာအကောငျးဆုံး တီထှငျမှုတှထေဲက တဈခုပါ။ အဆိုပါ ကိရိယာကို တီထှငျခဲ့သူကတော့ ဂနျြယောငျးရှီ ဖွဈပွီး သူဟာ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျ လကျထကျမှာတော့ ထငျရှားတဲ့ သိပ်ပံပညာရှငျလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ ဂနျြယောငျးရှီကို အောကျဆုံးလှာ လူတနျးစားက မှဖှေားခဲ့ပမေယျ့ သူ့ရဲ့ ထူးခြှနျမှုကိုသိတဲ့ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ မွှောကျစားခဲ့ပါတယျ။
ယနခေ့တျေသုံး ကိုးရီးယားစာပကေို တီထှငျခွငျး
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျကွီးရဲ့ လုပျဆောငျမှုတှထေဲမှာ သူဟာ ယနခေ့တျေသုံး ကိုးရီးယားစာပကေို တီထှငျခဲ့ပွီး ကိုးရီးယားတို့ရဲ့ ကိုယျပိုငျစာပေ ဖွဈတဲ့ Hangul ဟာ ကိုးရီးယားသမိုငျးကို တခတျေဆနျးသဈစခေဲ့ပါတယျ။
Hangul ကို မတီထှငျခငျမှာ ကိုးရီးယား လူနမှေုစနဈထဲမှာ အထကျတနျး လူတနျးစားတှသော စာပတေတျမွောကျခဲ့ပါတယျ။ အဆိုပါ စာပကေို Hanja လို့ ချေါပွီး Hanja ဟာ တရုတျ အက်ခရာစာလုံးမြားကို အသုံးပွုပွီး ကိုးရီးယားစာပကေို ရေးသားရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ တရုတျစာလုံးနဲ့ ဆငျတူပမေယျ့ စာလုံး ဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ စာလုံးရဲ့ သဒ်ဒါ အနကျအဓိပ်ပါယျဟာ ကှာခွားပါတယျ။ ပွီးတော့ Hanja ဟာ ခကျခဲ့တဲ့အတှကျ ကိုးရီးယားသာမနျ လူတနျးစားတှဟော စာပတေတျမွောကျခွငျး မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ ယနခေတျေသုံး Hangul ကို တီထှငျခဲ့စဉျက နိုငျငံတဝှမျးမှာ မြားစှာသော ဝဖေနျမှုတှနေဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရပါတယျ။ သို့သျောလညျး နောကျပိုငျးမှာ သူ့ရဲ့ လုပျဆောငျမှုတှကွေောငျ့ လူတိုငျးလိုလို စာပသေငျကွားရာမှာ လှယျကူလာပွီး စာပတေတျမွောကျမှုမှာလညျး တိုးတကျလာပါတယျ။
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျကွီးဟာ ကိုရီးယားစာလုံးတှကေို ၁၄၄၃ ခုနှဈကနေ စပွီး နိုငျငံတှငျးမှာရှိတဲ့ ပညာရှငျတှနေဲ့ အတူ ကိုရီးယားစာလုံး Hangul (ဟာ-နျဂူး-လျ) ကို တီထှငျခဲ့ပါတယျ။ ပွညျသူတှအေတှကျလို့ဆိုပမေယျ့ နဂိုမူလ ကိုရီးယားမှာ အသုံးပွုခဲ့တဲ့ တရုတျစာလုံးတှကေိုပဲ အခွခေံပွီး ရှငျးလငျးခကျြတှေ ရေးသား ရပါတယျ။ အဲတာတှေ အားလုံးကို ရှငျးလငျးခကျြ စာအုပျ ဟေးဒေးဘှနျ (해례본-解例本) Haeryebon တှကေနေ တဆငျ့ ပွနျလညျသိရှိနား လညျခှငျ့ ရခဲ့ပါတယျ။ (훈민정음) Hun-Min-Jeong-Eum ဟှနျးမငျးဂြောငျးအနျးကို ရှငျးလငျးခကျြတှေ ရေးသား ထားတဲ့ စာအုပျ (၅)အုပျကနေ လလေ့ာရတာပါ။ ရှေးဟောငျးစာအုပျတှကေို ပုံတူပှား ထိနျးသိမျးထားတဲ့ စာအုပျတှေ ကနေ တဆငျ့ လလေ့ာရတာပါ။ စာအုပျ (၅)အုပျကတော့ ဂယျြဂြာဟဲ (제자해-制字解) လို့ ချေါတဲ့ ကိုရီးယားစာလုံး (ဟာ-နျဂူး-လျ) တီထှငျတဲ့ အခွခေံ သဘောတရားတှကေို ရှငျးလငျးထားတဲ့ စာအုပျ၊ နောကျတဈအုပျက ကိုရီးယားစာလုံး အစအသံကို ရှငျးလငျးထားတဲ့စာအုပျ- ခြိူဆောငှဲ (초성해-初聲解)၊ အလယျအသံကို ရှငျးလငျးထားတဲ့ ဂြူး-ငျဆောငှဲ (중성해-中聲解)၊ နောကျဆုံးအသံကို ရှငျးလငျးထား တဲ့ ဂြူံး-ငျဆောငှဲ (종성해-終聲解)၊ နောကျဆုံးမှာတော့ စာလုံးတဈခုခငျြးဆီက ပေါငျးစပျပွီး (တဈနညျး- ဗညျြး၊ သရပေါငျးစပျခွငျး) ရေးသားပုံ၊ အသံထှကျခွငျးတို့ကို ရှငျးလငျးထားတဲ့ ဟာ့-ပျဂြာဟဲ (합자해-合字解) ဆိုတဲ့ (၅) အုပျအပွငျ နောကျဆကျတှဲလို့ ပွောရမယျ့ ဗညျြး၊ သရပေါငျးတှကေို ဥပမာနဲ့ ရှငျးပွထားတဲ့ ယုံး-ငျဂြာရယျ (용자례-用字例) ဆိုတဲ့ စာအုပျကိုလညျး မွငျတှခှေ့ငျ့ ရပါတယျ။
၁၄၄၆ ခုနှဈ ကိုရီးစယား ရိုးရာ ပွက်ခဒိနျအရ ၉ လမှာ တိုငျးသူပွညျသားမြားကို ကိုရီးယားစာကို တီထှငျ ရေးသားပွီးခဲ့ကွောငျး ထုတျပွနျ ကွငွောကာ ကိုရီးယားစာကို လှယျကူစှာ လလေ့ာ သငျကွားနိုငျအောငျ လုပျဆောငျပေးခဲ့ပါတယျ။ ကိုရီးယားစာကို ပထမဦးဆုံး 훈민정음 ဟု(နျ)မီ(နျ)ဂြောငျ အူး(မျ) ဟု ချေါဆို အသုံးပွုခဲ့ပါတယျ။
ပထမဦးဆုံး စတငျ တီထှငျခဲ့စဉျက စာလုံးပေါငျး အက်ခရာ ၂၈ လုံး ရှိခဲ့ပမေယျ့ အခု လကျရှိမှာ အက်ခရာ ၂၄ လုံးကိုသာ အသုံးပွုနိုငျပါတော့တယျ။
ကိုရီးယားနိုငျငံဟာ ၁၉၁၀ ခုမှ ၁၉၄၅ ခုနှဈအထိ ဂပြနျ ဖကျဆဈလကျအောကျ ရောကျခဲ့ပွီးနောကျ ဂပြနျမြားဟာ ကိုရီးယား ယဉျကြေးမူနဲ စာပေ သမိုငျးမြားကို မွောကျမြားစှာ ဖကျြစီးခဲ့တဲ့အထဲမှာ ကိုရီးယားစာ ၄လုံးဟာလညျး ပါဝငျခဲ့ရပါတယျ။
ကိုးရီးယားစာပေ Hangul ဟနျဂူးစာလုံးတိုငျးဟာ ရိုးရှငျးတဲ့ပုံမြားဖွဈပွီး လူတိုရဲ့ စကားပွောစဉျ ထိမိသှားအင်ျဂါမြားနဲ့ (လြှာ သှား ပါးစပျ) ဖျောပွထားပါတယျ။ ဥပမာ အူ သံ ဆိုပါက eu အသံထှကျဖို့ လြှာက အလယျမှာရောကျနပွေီး ပါးစပျက ဝ ပုံစံ ရှိနတေယျဆို 으 eu စသညျဖွငျ့ အသံထှကျအင်ျဂါတှရေဲ့ လှုပျရှားမှုပုံစံကို အခွခေံပွီး တီထှငျခဲ့ပါတယျ။
ယနခေ့တျေ 한글날 [Hangul Day] Hangul ProclamationDay အောကျတိုဘာ ၉ ရကျနကေို့ ကိုရီးယားစာပနေေ့ အဖွဈ ၁၉၄၆ ခုနှဈမှ စတငျသတျမှတျခဲ့ပါတယျ။ အောကျတိုဘာ ၉ ရကျနေ့ ကိုရီးယားစာပနေေ့ ရောကျတိုငျး ဆဲလျဂြူံးယဉျကြေးမူဆု ပေးအပျပှဲ အခမျးအနားကို ခမျးနားစှာ ကငျြးပကာ ဆဲလျဂြူံး ဘုရငျ၏ မှေးရပျဌာနနေ ဂယောငျဂီပွညျနယျ ယောဂြူ မွို့၌ ဆဲလျဂြူံး ဘုရငျ၏ အုတျဂူတှငျ ကနျတော့ပှဲမြား ကငျြးပကွပါတယျ။
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျကွီး နတျရှာစံခွငျးနှငျ့ ဆဲလျဂြူံး ဘုရငျနဲ့ ပတျသတျသော အထိမျးအမှတျမြား
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ ၁၄၅၀ ဧပွီလ ၈ ရကျနေ့ သူ့အသကျ ၅၂ နှဈ အရှယျမှာ ဆီးခြိူရောဂါဖွငျ့ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျဟာ အသကျ ၂၁ နှဈ အရှယျနဲ့ နနျးတကျခဲ့ပမေယျ့ ကိုးရီးယား ပွညျသူတှအေတှကျ မြားစှာသော အမှအေနှဈမြားကို ခနျြရဈပေးထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူနတျရှာစံတဲ့နောကျမှာတော့ သူ့ရဲ့သားတျော အကွီးဆုံး မူဂြူံးဘုရငျ နနျးတကျခဲ့ပါတယျ။
ယနခေ့တျေ ဆဲလျဂြူံးဘုရငျနှငျ့ ပတျသတျသော အထိမျးအမှတျမြားစှာ ရှိပါတယျ။ ဆိုးလျမွို့လယျ လမျးမကွီးကို ဆဲလျဂြူံးနို လမျးမဟူ၍ ချေါဆိုကွပွီး ထိုနရောနားမှာပဲ ဆဲလျဂြူံး အနုပညာစငျတာကို ဖှငျ့လှဈထားပါတယျ။
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျ ပုံပါ တဈသောငျးတနျ (ငှစေက်ကူ ) အား ၁၉၇၂ ခုနှဈက စတငျ ပုံနှိပျကာ ဂုဏျပွုမှတျတမျး တငျခဲ့ပါတယျ။
၂၀၁၂ ခုနှဈ ဇူလိုငျ ၁ ရကျတှငျ ဆဲလျဂြူံး မွို့သဈကို တညျဆောကျကာ ဂုဏျပွုခဲ့ပွနျပါတယျ။ ဆဲလျဂြူံး မွို့သဈဟာ ကိုရီးယား အစိုးရဝနျကွီးဌာမြား အားလုံး ရုံးစိုကျရာ မွို့ဖွဈပါတယျ။
ဆဲလျဂြူံးဘုရငျကွီးရဲ့ အကွောငျးကို ဇာတျလမျးတှဲမြား ရိုကျကူးထားပွီး မွဝတီမှာတော့ ဇာတျလမျးတှဲ ၂ ခုလုံး ပွသသှားပါတယျ။ ကြှနျတျော နာမညျတော့ မမှတျမိတော့ဘူးဗြ။ အက်ခရာစာလုံးလေးမြား တီထှငျသူဆိုလားပဲ ဇတျလမျးတှဲ တဈခုနာမညျကတော့ သခြောမမှတျမိဘူး။
The Divine Weapon ထဲမှာတော့ ဆဲလျဂြူံးဟာ မငျးသားဘဝမှာပဲ ရှိပါသေးတယျ။
တောငျကိုးရီးယားရတေပျမှာလညျး Sejong the Great-Class Destroyer ဆိုပွီး ဆဲလျဂြူံး ဘုရငျ၏ နာမညျဖွငျ့ တပျတျောဝငျပွီး နိုငျငံတာဝနျကို ထမျးဆောငျလကျြ ရှိပါတယျ။
ကိုးရီးယားဘာသာစကားကို ယခု ဆဲလျဂြူံး ဘုရငျကွီး ရေးသားခြိနျမှသာ လလေ့ာခဲ့ရသဖွငျ့ မှားယှငျးမှုမြား? လိုအပျတာမြား ရှိလြှငျလညျး ထောကျပွပေးဖို့ မတ်ေတာရပျခံပါတယျ။
Credit : Swam Htet(မှတျစုကွမျး)
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ကြီး သို့မဟုတ် ကိုးရီးယား အက္ခရာစာလုံးများကို မွေးဖွားပေးခဲ့သူ
ကိုးရီးယားတွေရဲ့ သမိုင်းမှာ အရေးပါဆုံးသော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ရှိခဲ့ရာမှာ ဘုရင်ကြီး ဆဲလ်ဂျူံးလည်း တစ်ဦးအပါအဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆယ်ဂျူံး ဘုရင်ကြီးဟာ ဂျိူဆွန်းခေတ်ရဲ့ ၄ ဆက်မြောက် ဘုရင်ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဂျိူးဆွန်းခေတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ သာမက ခေတ်သစ် ကိုးရီးယားနိုင်ငံအတွက်ပါ အရေးပါတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးပါ။ သူ့လက်ထက်မှာ ယနေ့ခေတ်သုံး ကိုးရီးယားစာပေကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ကိုးရီးယားတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာပေအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သူပါ။
ဂိုဂျိူဆွန်းခေတ်မှသည် ဂျိူဆွန်း နိုင်ငံ ပေါ်ထွက်လာသည်အထိ ခေတ်အဆက်ဆက် ကိုးရီးယားလူမျိူးတို့ဟာ တရုတ်စာပေကိုသာ သုံးစွဲခဲ့ကြပြီး ကိုယ်ပိုင်စာပေ မရှိသေးပါဘူး။ တရုတ်စာပေဟာ ကိုးရီးယားတို့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ လူအနည်းစုသာ တတ်မြောက်တဲ့ ဘာသာဖြစ်ပြီး လူတိုင်း စာပေတတ်မြောက်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဘုရင်ကြီး ဆဲလ်ဂျူံးလက်ထက်မှာ လူတိုင်း စာပေတတ်မြောက်အောင် ကိုယ်ပိုင်စာပေကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆဲလ်ဂျူံး ဘုရင်လက်ထက်မှာ ကိုရီးယားစာပေတင် မကဘဲ မိုးရေချိန်တိုင်း ကိရိယာ၊ နက္ခတာရာကြည့် ကိရိယာ၊ နေနာရီ၊ ရေနာရီ၊ ရေတက်ရေကျတိုင်း ကိရိယာ၊ လေတိုက်ညွှန်တံ စတဲ့ စမ်းသစ်တဲ့ ပညာတွေကိုလည်း မြောက်များစွာ တီထွင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
(ဂိုဂျိူးဆွန်းဆိုသည်မှာ ရှေးခေတ် ဂျိူဆောင်ခေတ် အစောဆုံး ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ချင်ခေတ်မှာ စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ထို့ထက်လည်း စောနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဟန်ခေတ်မှာ ဂိုဂျိူဆွန်း ခေါ် ရှေးဂျိူဆောင် နိုင်ငံကို ဟန်အင်ပါယာမှ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ နိုင်ငံပျက်သုန်းသွားခဲ့ပြီး ဘူရော အုတ်ဂျိူဒယ်ဘန်း စသည်ဖြင့် နယ်မြေများ ကွဲထွက်သွားခဲ့ပြီး ဂျူ မုံ ဘုရင်မှ မြောက်ဘက် နယ်မြေများကို စုစည်းကာ ဂိုဂူလျော နိုင်ငံအဖြစ် ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါ။)
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ကြီးကို ခရစ်နှစ် 1397 ခုနှစ် May လ 15 ရက်နေ့မှာ ဂယောင်ဂီပြည်နယ် ဟန်ဆောင်း (ယခု ဆိုးလ်မြို့) မြို့၌ ခမည်းတော် ထဲယ်ဂျူံး ဘုရင် နှင့် မိဖုရားခေါင်ကြီး ဝမ်ယောင်း တို့မှ မွေးခဲ့ပါတယ်။ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ မွေးချင်းညီအကိုများထဲမှာ ၃ ယောက်မြောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်နာမည်မှာ 이도 李祹 လီဒို ယီဒုံ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင် အသက် ၁၂ နှစ် အရွယ်မှာတော့ မင်းသား ချွန်းယောင်း 충녕대군 ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်သေးတဲ့ ဆဲလ်ဂျူံး မင်းသားလေးဟာ စာပေလေ့လာရာမှာ ထူးချွန်တဲ့အတွက် ထယ်ဂျူံးဘုရင် မင်းသားလေးကို သူ့အကို ၂ ယောက်ထက် နှစ်သက်သဘောကျခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လည်း ဆဲလ်ဂျူံးဟာ နန်းတက်ဖို့ ပြိုင်ဘက်ကင်းခဲ့ပေမယ့် နန်းတွင်းထုံးတမ်း အစဉ်အလာအရ သူ့အကိုကတော့ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား ဖြစ်နေသေးပါတယ်။ ၁၄၀၄ သူ့အကိုဟာ အိမ်ရှေ့စံအဖြစ် တင်မြှောက်ခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော် သူ့အကိုဟာ လွပ်လတ်စွာ နေထိုင်ရတာကို နှစ်သက်ပြီး အမဲလိုက်ခြင်းနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများ ကျင်းပခြင်းတို့ကြောင့် ၁၄၁၈ ဂျွန်လပိုင်းမှာတော့ အိမ်ရှေ့စံရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။
တချိူ့ကတော့ အစ်ကိုတော် ရန်းယောင်းမင်းသားဟာ သူ့ညီ ဆဲလ်ဂျူံး မင်းသားကို ညီအကိုတွေထဲမှာ အချစ်ဆုံးမို့ သူကိုယ်တိုင် အိမ်ရှေ့စံအဖြစ်ကနေ စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်လို့ ပြောကြပေမယ့် မှတ်တမ်းတော့ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒုတိယ အကိုကြီးကလည်း လူ့ဘောင်ကို စွန့်ခွာပြီး ဘုန်းကြီးဝတ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဆဲလ်ဂျူံးဟာ အသက် ၂၁ နှစ် ၁၄၁၈ မှာ အိမ်ရှေ့စံမင်းသား အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာတော့ သူ့အကိုကြီးကို အိမ်ရှေ့စံအဖြစ်က ထုတ်ပယ်ပြီး သူ့က်ို အိမ်ရှေ့စံမင်းသားအဖြစ် ပေးတာကို မှူးမတ်များ နန်းတွင်းအမတ် တချိူ့က မကျေနပ်ကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ၁၄၁၈ ဆဲလ်ဂျူံးကို အိမ်ရှေ့စံအဖြစ် ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ထယ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ ဘုရင်ရာထူးမှ အနားယူခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထယ်ဂျူံး ဘုရင်ရဲ့ အရှိန်အဝါကတော့ ရှိနေဆဲပါ။ ဆဲလ်ဂျူံး ဘုရင်ဟာ ထလ်ဂျူံး ဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံတဲ့ ၁၄၂၂ ခုနှစ်အထိ အစိုးရအတွင်း မူဝါဒများကို ပြောင်းလဲခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့သေးပါဘူး။
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ နိုင်ငံရေးပြောင်းလဲမှု အနေနဲ့ ကွဲပြားခြားနားထားတဲ့ လူနေမှုပုံစံကနေ တိုင်းပြည်အတွက် လိုအပ်တဲ့ နေရာတွေမှာ လူတန်းစား အဆင့်အတန်းမခွဲခြားပဲ ထူးချွန်သူတွေကို ခန့်အပ်တဲ့ပုံစံ ကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့ပြီး သူ့ပြည်သူတွေကိုလည်း ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒကို ကျင့်သုံးဖို့ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့လက်ထက်မှာ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒဟာ ဂျိူဆွန်း လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တွင်ကျယ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကွန်ဖြူးရှပ်ဝါဒနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ စာအုပ်တွေကိုလည်း ထုတ်ဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သူဟာ မဟာယန ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အဖြစ် ကူးပြောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်လက်ထက်မှာတော့ တရုတ်နိုင်ငံ မင်မင်းဆက်နဲ့ သဘောတူညီချက် တချိူ့ကို အောင်မြင်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး ဂျိူဆွန်းပြည်ရဲ့ စီပွားရေးကို အကျိူးအမြတ်ရရှိအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျာချန်လူမျိူးတွေနဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးကောင်းကို တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး မြောက်ဘက် ကိုးရီးယားနယ်စပ်မှာ တပ်မြေ ၄ ခု မြို့ ၆ မြို့မှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်စခန်း ၁၀ ခုကို ထပ်မံတိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံနဲ့လည်း ကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့ပြီး ဆိပ်ကမ်းမြို့ ၃ ခုမှာ ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆူရှီးမားကျွန်းကို စစ်တပ်ဖြင့် ကျူးကျော်ခဲ့ပြီး တောင်ပင်လယ်မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့ ဓားပြတွေကို နှိမ်နင်းခဲ့ပါတယ်။ အဲ့အချိန်က ဆူရှီးမားကျွန်းဟာ ဂျပန်ပင်လယ်ဓားပြတွေရဲ့ အခြေစိုက်စခန်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျိူဆွန်းစစ်တပ်အင်အားကို တိုးချဲ့ခြင်း
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ ဂျိူဆွန်းခေတ် စစ်တပ်ကို အင်အားကြီးတဲ့ စစ်တပ်ဖြစ်အောင် တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဘုရင်တပါးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့လက်ထက်မှာ ဂျိူဆွန်းစစ်တပ်ကို အင်အားကြီး စစ်တပ်ဖြစ်လာအောင် များစွာသော စစ်စည်းကမ်းများ စစ်မှုထမ်းဥပဒေများကို ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့အပြင် စစ်လက်နက်များကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အမြောက်များ ဒုံကျည် (မြတံပူ) မီးမြှားပစ်အမြောက်များ မော်တာအမြောက်များကို ယမ်းမှုန့်များ အသုံးပြုကာ တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံတဝှမ်းရှိ စစ်တပ်တိုင်းမှာ တပ်ဆင် အသုံးပြုစေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လည်း အင်ဂျင်းနှစ် စစ်ပွဲများအတွင်းမှာ အမြောက်များကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုပြီး ရေကြောင်းစစ်ပွဲ မြေပြင်စစ်ပွဲများမှာ အမြောက်များဖြင့် ဂျပန်တို့ကို အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။
၁၄၁၉ မေလမှာတော့ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ အနားယူသွားသော ဘုရင် ထယ်ဂျူံး၏ အကြံပေးချက်အရ ဆူရှီးမားကျွန်းကို အခြေစိုက်ကာ တောင်ပင်လယ်၏ ကုန်သွယ်ရေးကို နှောင့်ယှက်နေသော ဂျပန် ပင်လယ်ဓားပြတို့အား နှိမ်နင်းရန် ဂျိူဆွန်း စစ်တပ်ကို စေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စစ်ပွဲအတွင်း ဂျပန်ပင်လယ်ဓားပြ ၂၄၅ ယောက်ကို သတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၁၀ ယောက်ကို အရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဂျိူဆွန်းဘက်မှ စစ်သည် ၁၈၀ ကျော် ကျဆုံးခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် ၁၄၁၉ စက်တင်ဘာလမှာတော့ ဂျိူဆွန်း စစ်တပ်ဟာ ပြည်တော်ပြန်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆူရှီးမား ကျွန်းစု ဒိုမြို နဲ့ တကယ်တမ်း သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့တာကတော့ ၁၄၄၃ ခုနှစ်မှသာ ရရှိခဲ့တာပါ။ ဆူရှီမား ဒိုင်မြိုဟာ ၁၄၄၃ မှာ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ထံ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာများ ဆက်သကာ ဆူရှီးမားကျွန်းနဲ့ ဂျိူဆွန်းတို့အကြား ကုန်သွယ်ခွင့် သဘောတူညီချက် စာချူ ပ်ကို ချူ ပ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စာချူ ပ်အရ ဂျပန်ပြည်ဟာ ဂျိူဆွန်းရဲ့ ဆိပ်ကမ်း ၃ ခုမှာ ကုန်သွယ်ခွင့်ရပါမယ်။
၁၄၃၃ ခုနစ်မှာတော့ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ စစ်သူကြီး ကင်ဂျူံဆိုးကို ဗိုလ်ချူ ပ်ကြီးအဖြစ် ရာထူးတိုးပေးပြီး မြောက်ပိုင်းရှိ ဂျာချန်လူမျိူးစု (ယနေ့ခေတ် မန်ချူးလူမျိူးစု) တို့ကို နှိမ်နင်းစေပါတယ်။ ကင်ဂျူံဆိုးနဲ့ သူ့စစ်တပ်ဟာ မြောက်ပိုင်းဒေသရှိ ဂျာချန်တို့ကို နှိမ်နင်းခဲ့ပြီး မြောက်ဘက်ကို နယ်မြေချဲ့ထွင်ရာမှာ ယနေ့ခေတ် မြောက်ကိုရီးယား တရုတ်နယ်စပ်အထိ နယ်မြေချဲ့ထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့နောက် မြောက်ဘက် နယ်စပ်ကို ကာကွယ်ဖို့ ခံတပ်မြို့ ၄ ခုနဲ့ နယ်စပ် စစ်စခန်း ၆ ခုဖြင့် တပ်စွဲထားခဲ့ပြီး ဂျာချန်တို့၏ ရန်မှကာကွယ်ရန် စီမံထားခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းပြည်အတွင်း ပြု ပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ လယ်သမားတွေကို ကူညီပေးချင်တာကြောင့် လယ်ယာသုံး လက်စွဲစာအုပ်ကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ စာအုပ်မှာ လအလိုက် စိုက်ပျိူးသင့်တဲ့ သီးနှံတွေ လယ်သမားတွေအတွက် အကျိူးရှိမယ့် သတင်းမှတ်တမ်းတွေ သီးနှံစိုက်ပျိူးနည်းတွေ စသည်ဖြင့် ထည့်သွင်းရေးသားထားပါတယ်။ ထို့အပြင် မိုးရေချိန်တိုင်း ကိရိယာ၊ နက္ခတာရာကြည့် ကိရိယာ၊ နေနာရီ၊ ရေနာရီ၊ ရေတက်ရေကျတိုင်း ကိရိယာ၊ လေတိုက်ညွှန်တံ စတဲ့ စမ်းသစ်တဲ့ ပညာတွေကိုလည်း မြောက်များစွာ တီထွင်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မိုးရေချိန်တိုင်း ကိရိယာဟာ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး တီထွင်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ကိုးရီးယားလူမျိူးတွေရဲ့ ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံး တီထွင်မှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ အဆိုပါ ကိရိယာကို တီထွင်ခဲ့သူကတော့ ဂျန်ယောင်းရှီ ဖြစ်ပြီး သူဟာ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင် လက်ထက်မှာတော့ ထင်ရှားတဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ ဂျန်ယောင်းရှီကို အောက်ဆုံးလွှာ လူတန်းစားက မွေဖွားခဲ့ပေမယ့် သူ့ရဲ့ ထူးချွန်မှုကိုသိတဲ့ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ မြှောက်စားခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်သုံး ကိုးရီးယားစာပေကို တီထွင်ခြင်း
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ကြီးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေထဲမှာ သူဟာ ယနေ့ခေတ်သုံး ကိုးရီးယားစာပေကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ကိုးရီးယားတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာပေ ဖြစ်တဲ့ Hangul ဟာ ကိုးရီးယားသမိုင်းကို တခေတ်ဆန်းသစ်စေခဲ့ပါတယ်။
Hangul ကို မတီထွင်ခင်မှာ ကိုးရီးယား လူနေမှုစနစ်ထဲမှာ အထက်တန်း လူတန်းစားတွေသာ စာပေတတ်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆ်ိုပါ စာပေကို Hanja လို့ ခေါ်ပြီး Hanja ဟာ တရုတ် အက္ခရာစာလုံးများကို အသုံးပြုပြီး ကိုးရီးယားစာပေကို ရေးသားရပါတယ်။ ဒါကြောင့် တရုတ်စာလုံးနဲ့ ဆင်တူပေမယ့် စာလုံး ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ စာလုံးရဲ့ သဒ္ဒါ အနက်အဓိပ္ပါယ်ဟာ ကွာခြားပါတယ်။ ပြီးတော့ Hanja ဟာ ခက်ခဲ့တဲ့အတွက် ကိုးရီးယားသာမန် လူတန်းစားတွေဟာ စာပေတတ်မြောက်ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ ယနေခေတ်သုံး Hangul ကို တီထွင်ခဲ့စဉ်က နိုင်ငံတဝှမ်းမှာ များစွာသော ဝေဖန်မှုတွေနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သို့သော်လည်း နောက်ပိုင်းမှာ သူ့ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့် လူတိုင်းလိုလို စာပေသင်ကြားရာမှာ လွယ်ကူလာပြီး စာပေတတ်မြောက်မှုမှာလည်း တိုးတက်လာပါတယ်။
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ကြီးဟာ ကိုရီးယားစာလုံးတွေကို ၁၄၄၃ ခုနှစ်ကနေ စပြီး နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ ပညာရှင်တွေနဲ့ အတူ ကိုရီးယားစာလုံး Hangul (ဟာ-န်ဂူး-လ်) ကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအတွက်လို့ဆိုပေမယ့် နဂိုမူလ ကိုရီးယားမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ တရုတ်စာလုံးတွေကိုပဲ အခြေခံပြီး ရှင်းလင်းချက်တွေ ရေးသား ရပါတယ်။ အဲတာတွေ အားလုံးကို ရှင်းလင်းချက် စာအုပ် ဟေးဒေးဘွန် (해례본-解例本) Haeryebon တွေကနေ တဆင့် ပြန်လည်သိရှိနား လည်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ (훈민정음) Hun-Min-Jeong-Eum ဟွန်းမင်းဂျောင်းအန်းကို ရှင်းလင်းချက်တွေ ရေးသား ထားတဲ့ စာအုပ် (၅)အုပ်ကနေ လေ့လာရတာပါ။ ရှေးဟောင်းစာအုပ်တွေကို ပုံတူပွား ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေ ကနေ တဆင့် လေ့လာရတာပါ။ စာအုပ် (၅)အုပ်ကတော့ ဂျယ်ဂျာဟဲ (제자해-制字解) လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုရီးယားစာလုံး (ဟာ-န်ဂူး-လ်) တီထွင်တဲ့ အခြေခံ သဘောတရားတွေကို ရှင်းလင်းထားတဲ့ စာအုပ်၊ နောက်တစ်အုပ်က ကိုရီးယားစာလုံး အစအသံကို ရှင်းလင်းထားတဲ့စာအုပ်- ချိူဆောငှဲ (초성해-初聲解)၊ အလယ်အသံကို ရှင်းလင်းထားတဲ့ ဂျူး-င်ဆောငှဲ (중성해-中聲解)၊ နောက်ဆုံးအသံကို ရှင်းလင်းထား တဲ့ ဂျူံး-င်ဆောငှဲ (종성해-終聲解)၊ နောက်ဆုံးမှာတော့ စာလုံးတစ်ခုချင်းဆီက ပေါင်းစပ်ပြီး (တစ်နည်း- ဗျည်း၊ သရပေါင်းစပ်ခြင်း) ရေးသားပုံ၊ အသံထွက်ခြင်းတို့ကို ရှင်းလင်းထားတဲ့ ဟာ့-ပ်ဂျာဟဲ (합자해-合字解) ဆိုတဲ့ (၅) အုပ်အပြင် နောက်ဆက်တွဲလို့ ပြောရမယ့် ဗျည်း၊ သရပေါင်းတွေကို ဥပမာနဲ့ ရှင်းပြထားတဲ့ ယုံး-င်ဂျာရယ် (용자례-用字例) ဆိုတဲ့ စာအုပ်ကိုလည်း မြင်တွေ့ခွင့် ရပါတယ်။
၁၄၄၆ ခုနှစ် ကိုရီးစယား ရိုးရာ ပြက္ခဒိန်အရ ၉ လမှာ တိုင်းသူပြည်သားများကို ကိုရီးယားစာကို တီထွင် ရေးသားပြီးခဲ့ကြောင်း ထုတ်ပြန် ကြေငြာကာ ကိုရီးယားစာကို လွယ်ကူစွာ လေ့လာ သင်ကြားနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယားစာကို ပထမဦးဆုံး 훈민정음 ဟု(န်)မီ(န်)ဂျောင် အူး(မ်) ဟု ခေါ်ဆို အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး စတင် တီထွင်ခဲ့စဉ်က စာလုံးပေါင်း အက္ခရာ ၂၈ လုံး ရှိခဲ့ပေမယ့် အခု လက်ရှိမှာ အက္ခရာ ၂၄ လုံးကိုသာ အသုံးပြုနိုင်ပါတော့တယ်။
ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာ ၁၉၁၀ ခုမှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ ဂျပန် ဖက်ဆစ်လက်အောက် ရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဂျပန်များဟာ ကိုရီးယား ယဉ်ကျေးမူနဲ စာပေ သမိုင်းများကို မြောက်များစွာ ဖျက်စီးခဲ့တဲ့အထဲမှာ ကိုရီးယားစာ ၄လုံးဟာလည်း ပါဝင်ခဲ့ရပါတယ်။
ကိုးရီးယားစာပေ Hangul ဟန်ဂူးစာလုံးတိုင်းဟာ ရိုးရှင်းတဲ့ပုံများဖြစ်ပြီး လူတိုရဲ့ စကားပြောစဉ် ထိမိသွားအင်္ဂါများနဲ့ (လျှာ သွား ပါးစပ်) ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဥပမာ အူ သံ ဆိုပါက eu အသံထွက်ဖို့ လျှာက အလယ်မှာရောက်နေပြီး ပါးစပ်က ဝ ပုံစံ ရှိနေတယ်ဆို 으 eu စသည်ဖြင့် အသံထွက်အင်္ဂါတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံစံကို အခြေခံပြီး တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် 한글날 [Hangul Day] Hangul ProclamationDay အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့ကို ကိုရီးယားစာပေနေ့ အဖြစ် ၁၉၄၆ ခုနှစ်မှ စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာ ၉ ရက်နေ့ ကိုရီးယားစာပေနေ့ ရောက်တိုင်း ဆဲလ်ဂျူံးယဉ်ကျေးမူဆု ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားကို ခမ်းနားစွာ ကျင်းပကာ ဆဲလ်ဂျူံး ဘုရင်၏ မွေးရပ်ဌာနနေ ဂယောင်ဂီပြည်နယ် ယောဂျူ မြို့၌ ဆဲလ်ဂျူံး ဘုရင်၏ အုတ်ဂူတွင် ကန်တော့ပွဲများ ကျင်းပကြပါတယ်။
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ကြီး နတ်ရွာစံခြင်းနှင့် ဆဲလ်ဂျူံး ဘုရင်နဲ့ ပတ်သတ်သော အထိမ်းအမှတ်များ
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ ၁၄၅၀ ဧပြီလ ၈ ရက်နေ့ သူ့အသက် ၅၂ နှစ် အရွယ်မှာ ဆီးချိူရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ဟာ အသက် ၂၁ နှစ် အရွယ်နဲ့ နန်းတက်ခဲ့ပေမယ့် ကိုးရီးယား ပြည်သူတွေအတွက် များစွာသော အမွေအနှစ်များကို ချန်ရစ်ပေးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူနတ်ရွာစံတဲ့နောက်မှာတော့ သူ့ရဲ့သားတော် အကြီးဆုံး မူဂျူံးဘုရင် နန်းတက်ခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့ခေတ် ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်နှင့် ပတ်သတ်သော အထိမ်းအမှတ်များစွာ ရှိပါတယ်။ ဆ်ိုးလ်မြို့လယ် လမ်းမကြီးကို ဆဲလ်ဂျူံးနို လမ်းမဟူ၍ ခေါ်ဆိုကြပြီး ထိုနေရာနားမှာပဲ ဆဲလ်ဂျူံး အနုပညာစင်တာကို ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင် ပုံပါ တစ်သောင်းတန် (ငွေစက္ကူ ) အား ၁၉၇၂ ခုနှစ်က စတင် ပုံနှိပ်ကာ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၁ ရက်တွင် ဆဲလ်ဂျူံး မြို့သစ်ကို တည်ဆောက်ကာ ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဆဲလ်ဂျူံး မြို့သစ်ဟာ ကိုရီးယား အစိုးရ၀န်ကြီးဌာများ အားလုံး ရုံးစိုက်ရာ မြို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆဲလ်ဂျူံးဘုရင်ကြီးရဲ့ အကြောင်းကို ဇာတ်လမ်းတွဲများ ရိုက်ကူးထားပြီး မြဝတီမှာတော့ ဇာတ်လမ်းတွဲ ၂ ခုလုံး ပြသသွားပါတယ်။ ကျွန်တော် နာမည်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျ။ အက္ခရာစာလုံးလေးများ တီထွင်သူဆိုလားပဲ ဇတ်လမ်းတွဲ တစ်ခုနာမည်ကတော့ သေချာမမှတ်မိဘူး။
The Divine Weapon ထဲမှာတော့ ဆဲလ်ဂျူံးဟာ မင်းသားဘဝမှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။
တောင်ကိုးရီးယားရေတပ်မှာလည်း Sejong the Great-Class Destroyer ဆိုပြီး ဆဲလ်ဂျူံး ဘုရင်၏ နာမည်ဖြင့် တပ်တော်ဝင်ပြီး နိုင်ငံတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါတယ်။
ကိုးရီးယားဘာသာစကားကို ယခု ဆဲလ်ဂျူံး ဘုရင်ကြီး ရေးသားချိန်မှသာ လေ့လာခဲ့ရသဖြင့် မှားယွင်းမှုများ? လိုအပ်တာများ ရှိလျှင်လည်း ထောက်ပြပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Credit : SwamHtet(မှတ်စုကြမ်း)